दुइ तिहाइ काे सरकार भएपनि जनतासँग लड्न नसक्ने रेखा थापाकाे दावी - Saptakoshionline
दुइ तिहाइ काे सरकार भएपनि जनतासँग लड्न नसक्ने रेखा थापाकाे दावी
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख २२, २०७६ समय: २:२६:१८
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रकी अभिनेत्री तथा सामाजीक अभियान्ता रेखा थापा जनताको माझमा आवाज उठाउदै आन्दोलनमा सहभागी हुन सडकमा पुगेकी छिन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा एकपछि अर्काे काण्ड मच्चिएको भन्दै उनी शनीबार सरकारविरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुन सडकमा पुगेकी हुन् ।
सरकार एकपछि अर्काे गर्दै आलोचित मात्र नभई जनताबाट बोल्ने अधिकार खोस्न थालेपछि आफु सडकमा आएको अभिनेत्री थापाले सार्वजानीक रुपमा भाषण गरेकी छन । थापाले निर्मला हत्याकाण्ड, वाइडबडी काण्ड, नागरिकता काण्ड, एनसेल काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्डपछि मेरो सरकार काण्ड भएको भन्दै काण्डै काण्डमा ओली सरकार आलोचित भइरहेका बेला अभिनेत्री थापा आन्दोलनमा सहभागी हुन सडकमा पुगेकी हुन् ।
रेखा थापाले भाषण गर्ने क्रममा भनीन ‘यहाँ जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाएका छैनन, यदी प्रश्न गर्ने ठाउँ पाइहाले भनेपनि जवाफ पाएका छैनन’, ‘सरकार निरंकुश बन्दैछ । निर्मलाको मुद्दा उठाउनु हुँदैन थियो रे । एनसेलको मुद्दा उठाउनु हुँदैन थियो रे । हामीले वाइडवडी काण्ड उठाउनु हुँदैन थियो रे । हामीले ‘पुल कहिले बन्ने, तुइन फाल्यौँ ? भन्नै नमिल्ने भएको छ ।’
अभिनेत्री थापाले काण्डै काण्ड मच्चाएर फिल्मको हिरोजस्तै ओली सरकार हिरो बन्न खोजेको तर भिलेनको भूमिका खेलेको बताइन । उनल चर्को स्वरमा भनीन् ‘हामीले चलचित्रको स्क्रिप्ट लेख्दाखेरी दुईओटा पात्रलाई मध्यनजर गर्छौँ । एउटा नायक अर्काे खलनायक । नायकका लागि डाइलग र सशक्त भूमिका दिने गर्छौ, डाइलगका भरमा हिरो बन्छ । खलनायक हर्कत र डाइलगकै भरमा बद्नाम हुन्छ । तर अचम्म के छ भने बालुवाटारमा बसेर राजनीतिक स्क्रिप्ट लेख्छन्। नायक बन्ने होडबाजीमा टेलिभिजनमा आएर अन्तर्वार्ता दिन्छन्। अनि हामी नेपाली जनताले चाहिँ नायक मान्दिनु पर्ने रे ! यो चलचित्रमा मात्र सम्भव छ ।’
अभिनेत्री थापाले बर्तमान सरकारसँग नडराउन आग्रह गरेकी छिन् । दुइ तिहाइ सरकार भएपनि जनतासँग लड्न नसक्ने उनले दावी गरिन । ‘अब नेपाली जनताले डराएर, त्रसित भएर, भयभित भएर र मूकदर्शक भएर सत्तामा बस्नेहरुले जे जे गर्छन् त्यो बसेर हेर्ने हो भने मेरो चलचित्रको डाइलग छ ‘डरको आँखामा यसरी आँखा जुधाएर हेर ताकि डर पनि तिमीसँग डराउन थालोस्।’ अनि त्यसपछि भनौला ‘यो देश, यो सत्ता, यो सिंहदरबार, यो बालुवाटार तिम्रा बाउ बाजेको सम्पत्ति होइन, हाम्रो हो।’
थापाले आफु कुनै प्रसिद्धिका लागि सडकमा आएको नभई जनताको प ्रश्नले सडकमा ल्याएको बताइन । ‘माफ गर्नुहोला रेखा थापालाई केही नपुगेर, नाम चाहिएर, प्रसिद्धि चाहिएर सडकमा आएको होइन। लाखौँ छोरीहरुको सवालमा म यो सडकमा उत्रिएको छु। लाखौँ युवाहरुका लागि यो सडकमा उभिएको छु। मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु विदेशमा बेचिनु परेको छ, उनीहरुका लागि उभिएको छु’ थापाले भनिन् ‘मेरो बहिनीहरुको सुरक्षा खोइ। बलात्कारीलाई किन सजाय हुन्न। बलात्कारीलाई चिनेर पनि किन छुट्याइन्छ ?’ नेताहरुले सम्पति पुस्तौपुस्तालाई पुग्नेगरी जस्मा गरेका अभिनेत्री थापाले आरोप लगाएकी छिन् । ‘घरमा पुस्तौँपुस्तालाई सम्पति जोडेर राख्र्ने, गरिब जनता जहिले पनि गरिब हुनु पर्ने ?’ उनले भनिन् ‘सत्तामा बसेकाहरुलाई महशुस हुनेछ उनीहरुले कुन र कस्तो क्रान्ति गरेर आए, हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ।’ रेखा थापाले एनसेललाई चेतावनी दिदै . भनीन एनसेलले कर नतीरेर अन्तराष्ट्रीय अदालतममा मुद्धा हाल्न गयो भने नेपाली युवाको आखामा आसु हैन रगत देख्न चाहन्छु । यसरी एनसेल र सार्वजानीक चासोको विषयमा कुरा उठाइरहदा रेखा थापालाई जनताको साथ सहयोग र हैसला प्राप्त भईरहेको छ।